Ilizwe elimangalisayo, elinezikhukula eziphakamileyo elinethafa kunye nendawo yomlilo
Burg (bei Magdeburg), Sachsen-Anhalt, Germany
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguSandra & Marcus
Hlala emva kwaye uphumle kule ndawo yokuhlala izolile, enesitayile kumbindi welizwe. Yonwabela iingokuhlwa ezipholileyo zasehlotyeni kwithafa okanye ekwindla epholileyo nangorhatya lwasebusika phambi kweziko. Vuka kwi-twittering yeentaka emithini kwaye ujonge indawo yasemaphandleni okanye indlela yebhayisekile ye-Elbe ngeenyawo okanye ngebhayisekile. Hamba kwiipaki zomboniso wangaphambili wezolimo kwidolophu encinci yaseBurg, ekumgama oziikhilomitha ezi-4 kuphela, kwaye wonwabele ikonsathi yomoya evulekileyo kwisidiliya esihle.
Ndwendwela iHundertwasser House kunye necathedral eMagdeburg, ikomkhulu lelizwe. Hlala apho kwenye yeebhari okanye ikhefi ecaleni kwe-Elbe, enomtsalane kakhulu ngokuhlwa. Elbauenpark enkulu kunye ehlotyeni toboggan run, ukutshintsha imiboniso kwi tower millennium kunye neekonsathi kwiqonga layo echibini zisoloko utyelelo.
Yiza uphumle kwindawo enomtsalane yemonki yeJeriko Monastery. Iikonsathi zenzeka apho phantse unyaka wonke kwaye ukusukela ngehlobo lika-2019 umnyhadala wejazz uzinzile kunye noTill Brönner nabanye kwaye waziwa kwimida yelizwe.
Umbuki zindwendwe ngu- Sandra & Marcus